Shiinaha Custom Dog Tactical Vest Manufacturers, Alaab-qeybiyeyaal, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Hoyga > Waxyaabaha la xiriira xayawaanka Waxyaabaha la xiriira xayawaanka > Vest T eyda Tactical
Vest T eyda Tactical
Qalabka naylka ah ee tayada sare leh, waara, la dhaqi karo.xirmada eeyga way fududahay in la siibto oo la dago. Xadhigga la isku hagaajin karo ayaa ka dhigaya suunka kaamil ahaanshaha eeygaaga. Tani waa xulasho aad u fiican eeygaaga si aad u lugeeysid, u xerooto, u lugeyso una ciyaarto ciyaaro taatiko ah.
Jaakada taatikada eey
Faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.:
Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2003. Ganacsigeena ugu weyn waa nashqadeynta, soo saarida iyo iibinta alaabada boorsada, sida: boorsooyinka laptop-ka, boorsooyinka iskuulka ardayda, boorsooyinka iskuulka, bacda xafaayada, boorsooyinka banaanka, boorsooyinka isboortiga, rucksacks, boorsooyinka iskuulka kartoonada iyo alaabada kale. Isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale ballaarineynaa ganacsiyada kale, sida soosaarka Naqshadeynta: bacaha suunka, boorsooyinka duffel, boorsooyinka gacanta, boorsooyinka qalabka, boorsooyinka qadada, bacaha qoryaha, boorsooyinka taatikada ee militariga, boorsooyinka xayawaanka iyo alaabada kale. Si loo daboolo baahiyaha shaqsiyeed ee macaamiisha, waxaan sidoo kale dhisnay waax ka caawisa macaamiisha inay helaan qaybaha kale ee badeecadaha ee Shiinaha. Shiinaha dhexdiisa, waxaan leenahay silsilad xoog leh oo qaan gaar ah oo kor u kacsan iyo silsilad saadka oo hoos mara Tani waa faa'iidadayada ugu muhiimsan. Faa'iidadan awgeed, waxaan ugu adeegi karnaa dhammaan macaamiisheenna si dhakhso leh, ka wanaagsan oo ka wanaagsan, oo waxaan u siin karnaa macaamiisheenna adeegyo wax-soo-saar tayo sare leh oo tayo sare leh, waxaan sidoo kale macaamiisha ku siin karnaa badeecooyinkeena nooca asalka ah oo tayo sare leh. Shaqaalaheena 600 iyo 500 mashiinada wax soo saarka ayaa ah hantida ugu weyn. Sideen u ilaashan karnaa booskeena hogaaminta? Waxaan mudnaan siineynaa isku xirka dadka, waxaana mudnaanta siineynaa ilaalinta xuquuqda aadanaha ee shaqaalaha iyo ilaalinta xuquuqda macaamiisha. Aqoon isweydaarsiga 18,000 mitir murabac wuxuu noo ogolaanayaa inaan meel dhigno qalab badan oo wax soo saar iyo shaqaale wax soo saar leh, isla markaana aan u siino macaamiisha adeegyo ka imaado naqshadeynta wax soo saarka, soosaarka muunada, soosaarka tirada badan, saadka xamuulka, iyo bayaanka kastamka. Haddii aad u baahato inaad habeyso alaabada boorsadaada ama aad metesho sumadeena, fadlan nala soo xiriir:
1. Eeyaha ugu wanaagsan ee dharka eeyaha - ha u oggolaan xayawaankaaga iyo milkiilahaaga inay "waddada ku jajabiyaan":
(1) Waxyaabaha nayloon ee tayada sare leh, waara, la dhaqi karo.Xarxumada ayaa fududahay in lagu siibto isla markaana la saaro. Xadhigga la isku habeyn karo wuxuu ka dhigayaa waxtarka eygaaga.
(2) Waxay ku habboon tahay Labrador Retriever, German Shepherd, Golden Retriever, Bulldog, Rottweiler iyo eyda kale ee dhexdhexaadka ah iyo kuwa waaweyn.
(3) Saigon wax saanad caag ah, webbiska naylon, geeska dibedda iyo laastikada.Waxaan si taxaddar leh u soo qaadnay.
(4) Markaan socod lugeyneyno, waa xulasho wanaagsan inaan waqti aan la ilaawi karin ku qaadanno xayawaanka rabaayadda ah.
2. Jaakada taatikada eey product parameters (specifications)
4. Baakadaha iyo geynta jaakada taatikada eeyaha
(1) Qaybaha iibka: 1
(2) Cabbirka cabbirka ee caadiga ah: 20 * 8 * 20CM, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, si loo badbaadiyo xamuulka adiga.
(3) faahfaahinta xirxirida: 20CM X 8CM X 20CM. XXPCS / santuuqa Waxyaalaha kaartuunka: K = K 5 lakab oo ah warqad jiingado qaro weyn leh
(4) FCL miisaanka guud: 20KG.
(5) FCL miisaanka saafiga ah: 18KG.
S4: Ma waxaad tahay warshad ama ganacsade?
J: Waxaan nahay soo saaraha boorsooyinka Shiinaha, soo saaraha bacda Shiinaha, ma nihin ganacsade.
Q5: Maxay yihiin shuruudahaaga bixinta?
Q6. Imisa maalmood ayaa ah waqtiga hogaaminta shaybaarkaaga? Ma bixisaa shaybaar? Ma bilaashbaa mise waa siyaado?
(2) 7-10 maalmood oo shaqo oo shaybaarro la qaabeeyey ah iyo 48 saacadood oo tijaabo ah.
S9: oraah noocee ah ayaad aqbashaa Immisa maalmood ayaa lagu jiraa mudada oraahda?
Jawaab: (1) toogasho oraah sawir qaadasho ah, oraah sida ku xusan qoraalka nashqadeynta wax soo saarka, xigasho iyadoo la raacayo muunada la siiyay.
Q10aad. Imisa maalmood ayaa ah waqtiga hogaaminta shaybaarkaaga? Ma bixisaa shaybaar? Ma bilaashbaa mise waa siyaado?
J: (1ï¼ ‰ Haa, waxaan aqbalnaa kormeerka qeybta saddexaad.
(3) Waxaan nahay soo saaraha alaabada Disney baseball boorsooyinka, Wal-Mart boorsooyinka iyo Samsonite. Fadlan ku kalsoonow tayada wax soo saarkeena.
J: Waxaan fadhinaa Dongguan, markaa badanaa dekeddeenu waa Shenzhen ama Hong Kong.
S14: Ma jiraan wax farqi midab ah ama 1cm ah oo u dhexeeya sawirka iyo waxa dhabta ah ee midab ahaan iyo cabir ahaanba?
J: Midabka dhabta ah ee badeecada ayaa waxyar ka duwanaan kara midabka ka muuqda sawirka sababo la xiriira bandhigyo kala duwan iyo saameynta iftiinka.
Calaamadaha kulul: Dog Tactical Vest, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka
Boorsada side eyga
Boorsooyinka side bisada